सीमासँग गाँसिएको सुरक्षा चासो « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
« MISSION GOKHALAND – PARTY POLITICS OR REVOLUTION
DARJEELING: First electoral mandate for Morcha and more »
नेपाल र भारतबीच विद्यमान खुला सिमानाका केही सकारात्मक पक्ष छन् भने कयौं गुणा बढी नकारात्मक कुरा रहेका छन् । खुला सीमाका यस्ता नकारात्मक पक्ष सुरक्षा मामिलासँग गाँसिएका छन् । आतंककारी, अपराधी र विध्वंसकारी तत्त्व बिनारोकतोक खुला सीमा वारपार गरिरहेका छन् । अवैध कारोबारीले बिनाहिच्किचाहट चलखेल बढाइरहेका छन् । यस्ता तत्त्वले दुवै देशको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको पाइन्छ । यो दुवै देशको चासोको विषय रहिआएको छ ।
यसैगरी भारतीय नक्कली नोट तेस्रो देशबाट नेपाल भित्र्याई नेपालबाट तेस्रो देशकै नागरिकले भारतीय भूमिमा पुर्‍याउने काममा पनि खुला सीमाकै बाटो समात्ने गरेको सञ्चारमाध्यममा बराबर आउने गरेको छ । नक्कली नोट भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा छ्यापछ्याप्ती भेट्टाइनाले यसबाट भारतीय मौदि्रक अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न लाग्यो भनी भारत चिन्तित मुद्रामा रहेको छ । भारत र नेपालबीचको सीमा नियमन भइदिएको भए यस्ता अवैध कारोबार रोकथाम हुने थियो ।
यी सबै समस्या दुई देशबीच रहेको खुला तथा अनियन्त्रित सीमा व्यवस्थासँग जोडिएर रहेको छ । यसलाई नियमन गर्ने हो भने सुरक्षा मामिलाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान हुन सक्छ । अवैध र अनियमित कारोबार नियन्त्रणमा आउन सक्ने थियो । अपराधी र विध्वंसकारीको मनोबल खस्किने थियो । लस्कर-ए-तोइबाका सदस्य मुहमद ओमार मदनीजस्ता व्यक्ति नेपालबाट खुला सीमाको बाटो समाती नयाँदिल्ली पुग्न सक्ने थिएनन् । यसैगरी कुख्यात अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमले नेपालमा व्यापार सञ्जाल फिँजाउन सक्ने थिएनन् । छोटा राजन समूहका सदस्यले सञ्चार उद्यमी जमिम शाह र सांसद मिर्जादिल सादबेगजस्तालाई गोली ठोकी केही घन्टाभित्रै खुला सीमा पार गरी भारत हुँदै बैंकक हानिन सक्ने थिएनन् । नेपाल-भारत सीमा नियन्त्रित रहेको भए दोलखा लामाबगर उत्तरको लेप्चे गाउँबाट अवैध तरिकाले नेपाल भित्रने तिब्बती घूसपैठलाई भारतको धर्मशालामा रहेका दलाई लामासम्म पुर्‍याउने चलखेलमा हाम्रा पूर्वराज्यमन्त्रीजस्ता महोदय लाग्न सक्ने थिएनन् होला ।
यहाँ जिज्ञासा उठ्छ, खुला सीमासँग यतिका समस्या गाँसिएका छन् तापनि नेपाल-भारत सीमा नियमन गर्नुपर्ने कुरा किन दुवै देशका अधिकारी उठाउँदैनन् ? एसएम कृष्णाले भारतीय विदेशमन्त्रीका हैसियतमा १५ महिनाको अवधिमा दुईपटक नेपाल भ्रमण गरिसके । नेपालसमक्ष उनले समस्या मात्रै पोखे, समाधानको पाटो किन उल्लेख गरेनन् ? सीमा नियमन गर्नुपर्‍यो भनी उनले किन प्रस्ताव राखेनन् ? यही नै रहस्यमय छ । कतै सुरक्षा मामिला सम्हाल्न नेपाल सक्षम छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने भारतको आन्तरिक मनसाय रहेकाले उनले सीमालाई नियमन गरी समस्या समाधान गरौं भन्ने प्रस्ताव नराखेका हुन् कि ? सीमालाई खुलै राखेर नेपाल सधैं समस्याग्रस्त अवस्थामा रहोस् अथवा नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र परोस् भन्ने उसको मनोभावना पो हो कि ? अर्को कुरा, सुरक्षा मामिलामा नेपाल जहिले पनि भारतप्रति निर्भर रहोस् भनी नेपालको सुरक्षा चासो आफ्नो हातमा लिने मनसाय पो हो कि ? यस्तो नहुन पनि सक्छ तर समस्याग्रस्त सीमा नियमन गर्ने कुरो नउठेकाले शंका गर्ने बानी भएकाहरूलाई यसले ठाउँ दिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अनियन्त्रित सीमालाई नियमन गरौं भनी नेपालले किन भन्न नसकेको होला ? एक वचन बोल्दा के बिग्रन्थ्यो र ? भारतले नेपाललाई बराबर सतर्क गराउने गरेको छ, पाकिस्तानी आईएसआई एजेन्ट नेपालमा योजना बनाउँछन् र भारतमा पसेर गडबड मच्चाउँछन् । नयाँदिल्लीमा १ फेबु्रअरी २०११ मा भएको भारतीय मुख्यमन्त्रीहरूको आन्तरिक सुरक्षा सम्मेलनमा बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले नेपालबाट अवैध घूसपैठ, लागूऔषध तस्करी, नक्कली नोट, मानव तस्करी, आपराधिक र अन्य गतिविधि हुने गरेको बताएका थिए । छिमेकीको यस्ता भनाइबाट जोगिन नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । कतै कुनै ठूला घटना/दुर्घटना नभई नेपाल नजुर्मुराउने हो कि ?
२०५६ पुस ९ मा भारतीय विमानको काठमाडौंबाट अपहरण भएको थियो । अब अर्को यस्तै घटना भयो भने के हुन्छ ? बेलैमा नेपाल-भारत सतह मार्गको सीमा नियमन नगरेर यस्तै घटना पर्खिएको पो हो कि ? स्मरणीय छ, विमान अपहरण काण्डमा नेपालले धेरै दोष खेप्नुपरेको थियो । त्यस विमानमा सवार एक नेपाली नागरिकलाई अपहरणकारीको बिल्लासमेत भिराइएको थियो । अन्ततः भारतले नै उनलाई निर्दोष सावित गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर ठानी नेपाल अवतरण हुने भारतीय विमानमा एयर मार्सल राख्ने र त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरित विमानसँगै सुरक्षा ‘बुथ’ खडा गरी यात्रुको शरीर जाँच गर्ने प्रचलन पनि सुरु गरिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग गाँसिएको खुला सीमालाई नियमन गर्न एकाध वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । प्रथमतः मैदानी भागमा तैनाथ गरिएका सशस्त्र प्रहरीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा थप गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । यसका लागि ‘बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट’ को संख्या बाक्लो बनाउनुपर्छ र सीमा वारपार गर्ने यात्रुप्रति निगरानी राख्नुपर्छ । अवाञ्छित तथा अवैध यात्रुलाई रोक्ने, सोध्ने र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिनुपर्छ । यस काममा गुप्तचर निकायको सहयोगी भूमिका पनि रहनुपर्छ ।
दोस्रो उपाय, सीमा वारपार गर्ने यात्रु तथा व्यक्तिले तोकिएको नाकाबाट आधिकारिक परिचयपत्र देखाएर मात्र आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्मरणीय छ, विमान अपहरण काण्डपछि नेपाल र भारतका हवाईयात्रुले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सतह मार्गमा पनि लागू गरिए सुरक्षा कार्यले ठूलो बल पाउन सक्छ ।
तेस्रो चरणमा नेपाल र भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्ने हो भने दुईतर्फको दसगजाबीचमा काँडेतारको बार लगाउनुपर्छ ।
यस्ता बारबन्देजको लगभग १ सय ८० स्थानमा आवागमनको विन्दु खोलिनुपर्छ । यिनै नाकाबाट मात्र यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि भारत र नेपालको आपसी समन्वय र निर्णय आवश्यक पर्छ । सीमा समस्या दुवै देशको साझा सवाल हो । सुरक्षा संवेदनशीलता पनि दुवै देशको चासोको विषय भएकाले खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्न दुवै देशले संयुक्त रूपमा कदम चाल्नुबाहेक हालको परिस्थितिमा अर्को विकल्प देखिँदैन ।
लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविज्ञ हुन् ।
This entry was posted on May 13, 2011 at 10:15 am	and is filed under लेख/ रचना/ निबन्ध/विचार.